အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ Archives - Page5of 76 - BuzzFeed Myanmar
ဘေးဥပါဒ် မဖြစ်ပဲ အသားဖြူ လာစေဖို့ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးသင့်တဲ့အရာ ၅ ခု
အခုခေတ်မှာ အသားဖြူချင်တဲ့သူတွေက တော်တော်များပါတယ်။ အသားဖြူချင်လို့ဆိုပြီး အသားဖြူဆေးသောက်တာတွေ၊ အသားဖြူဆေးထိုးတာတွေက ဖြစ်နိုင်ရင် မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ…။ သဘာဝအတိုင်းလှတာကသာ အကောင်းဆုံးပါ။ သင်အသားဖြူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘေးဥပါဒ်မဖြစ်ပဲ သဘာဝအတိုင်း အသားအရေလှပြီး အသားဖြူလာအောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ရှည်ဖို့နဲ့ ဇွဲရှိဖို့တော့ လိုပါမယ်။ အခုရေတွင်းတူးပြီး အခုရေကြည်သောက်ချင်လို့တော့ ဘယ်ရမလဲနော်..။
ငယ်စဉ်ကတည်းက လေ့ကျင့်ခန်း မပြုလုပ်တဲ့အခါ အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်လောက်ရောက်လျှင် အမျိုးသမီး များ အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်း နှင့် ကင်ဆာ စတဲ့ ရောဂါမျိုးစုံဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငယ်ရွယ်စဉ်က လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မိတဲ့ ၄၀ကျော်မမ တွေအတွက်ထိရောက်မှုရှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း များကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ယောက်ျား တွေသဘောမကျတဲ့ မိန်းကလေးများရဲ့အမူအကျင့်များ
ပါးစပ်ကဖွင့်မပြောချင်ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတကယ်မနှစ်သက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အမူကျင့်တွေကတော့ .
မိန်းကလေးတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ရုပ်ချောပြီး လှပနေပါစေ။ ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီအကျင့်တွေကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့လှပနေတဲ့ နဂိုရုပ်ခံလေးကိုတောင် မှေးမှိန်သွားစေပါတယ်။ သူတို့ပါးစပ်ကဖွင့်မပြောချင်ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတကယ်မနှစ်သက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အမူကျင့်တွေကတော့ . . .
သားအိမ် ကင်ဆာရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ (၄) ခု
ရင်သားကင်ဆာ ၊ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ၊သားအိမ်ကင်ဆာ စသဖြင့် ရောဂါတွေကြောင့်အမျိုးသမီးတွေမှာ သေဆုံးမှု များပြားလျက်ရှိပါတယ် ။ယခုလို အဖြစ်များတဲ့ ရောဂါတွေထဲကသားအိမ်ကင်ဆာရဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ (၄)ခုကို
ဂျိုင်းသား ဖြူဝင်းစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံး အိမ်တွင်းကုထုံးနည်းဂျိုင်းသား ဖြူဝင်းစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံး အိမ်တွင်းကုထုံးနည်း
မိန်းကလေး အများစုက လှချင်ကြပါတယ်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလည်း အဝတ်အစားတွေကို ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ မိမိ၏ ဂျိုင်းသားက ဖြူဝင်းလှပနေဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေက ဂျိုင်းသားမှာ အမွှေးအမျှင်တွေ မရှိပေမဲ့ ဂျိုင်းသားက မဲနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို မဖြစ်ရလေအောင် လွယ်ကူပြီး ထိရောက်လှသော အိမ်တွင်းကုထုံးလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ရင်သား ကို တင်းရင်းလှပစေမယ့် အကောင်းဆုံး အိမ်တွင်းကုထုံးရင်သားကို တင်းရင်းလှပစေမယ့် အကောင်းဆုံး အိမ်တွင်းကုထုံး
အမျိုးသမီးအများစုက အသက်အရွယ် ရလာသောအခါ (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်ကျပြီးသည့်အခါ အဖြစ်အများဆုံး ရင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြသနာကတော့ ရင်သားအိကျခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုကြောင့် ရင်သားမှာ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်အား မရှိတော့ဘဲ အိကျလာခြင်းမျိုး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်က အမျိုးသမီး အများစုအဖို့ ယုံကြည်မှု လျော့နည်းစေပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ဖြစ်စေပေါ်လာစေပါတယ်။
၃ မိနစ်ထဲနဲ့ 100% ဖြူဖွေး သွားစေမယ့် အိမ်လုပ် သွားတိုက်ဆေး
တောက်ပတဲ့အဖြူရောင်သွားများနှင့် ကျန်းမာတဲ့ အပြုံးရှိခြင်းက တခြားလူကို ဆွဲဆောင် နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်။ လှပတဲ့အပြုံးတစ်ပွင့်က အရေးပါတဲ့အလှတရား လက္ခဏာ ထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လှပတဲ့ သွား များက မိမိကိုယ်ကို လေးစားမှုတိုးတတ်စေပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါ သေးငယ်တဲ့ ယောကျာ်းတွေကို မိန်းမတွေ ကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်း
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မွေးဖွားခဲ့သူတွေတိုင်းဟာ ထပ်တူညီ တူဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ဒါကြောင့် ရုပ်ရှည်၊ခန္ဓာကိုယ်၊အချိုးအစား၊အသံ စတာတွေ တယောက်နဲ့ တယောက်နဲ့ မတူညီပေမယ့် လူတွေဟာ ဒါကို တယောက်နဲ့ တယောက် လိုက်လံတုပနေစရာမလိုပဲ ကိုယ်စီမှာ ကောင်းတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ လိင်အင်္ဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေးငယ်တယ်လို့ 80% က ထင်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပြီး လမ်းမှာလိုက်ကာ အာမခံချက် မရှိတဲ့ ဆေးဝါးနဲ့ နည်းတွေ သုံးပြီး အသက်ပါ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။လိင်အင်္ဂါသေးသည့်တိုင် သင့်ကို သင့်လက်တွဲဖော်က စိတ်ပျက်ပြီး အချစ်ပေါ့မှာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ယောက်ျား တွေ ကိုယ့်ကို တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်စေမယ့် လျှို့ဝှက်နည်းလမ်း ၅သွယ်
သင်ဟာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သင့်ချစ်သူ၊ ခင်ပွန်း သို့မဟုတ် ယောက်ျားတစ်ယောက်၏ တန်းတန်းစွဲ ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပို့စ်ဟာ ကျော်မသွားသင့်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်က ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို နှစ်သက်သဘောကျတဲ့ပုံစံနဲ့ ယောကျာ်းဘက်က မိန်းမတစ်ယောက်ကို မြတ်နိုးသဘောကျတဲ့ပုံစံကလည်း မတူညီပါဘူး။ အားလုံးထင်ထားကြသလို ချောမောလှပတဲ့ မိန်းမလှတွေကို ယောက်ျားတွသဘောကျတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ သို့သော် ထိုရုပ်အဆင်းသာလှပြီး ကျန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ၊ကိုယ်ကျင့်တရား ၊ အမူအကျင့်တွေမှာ အရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့အလှက ထိုအမျိုးသားအတွက် ခဏတာဖျော်ဖြေစရာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝတစ်ခုလုံးကို ရင်းပြီး ပုံအောချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။